Fampitaovan’ny Vigie ny CUA: niampy ny « camera » hanaraha-maso ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra - ewa.mg
News - Fampitaovan’ny Vigie ny CUA: niampy ny « camera » hanaraha-maso ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra
Hanaraha-maso ny asa sy
ny fifamoivoizana. Natao, omaly, tetsy amin’ny lapan’ny tanàna
Analakely koa ny fanaovan-tsonia fifanaraham-piaraha-miasa eo
amin’ny CUA sy ny orinasa VIGIE. Natao hanatsarana ny
fifamoivoizana sy ny fanadiovana ny tanàna
Hanampy ny kaominina amin’ny
alalan’ny « Direction des transports de grand ville
urbains » sy ny SMA amin’ny fanadiovana ny lalana sy ny fomba
fanalana ny fako amin’ny fanaraha-maso amin’ireny fiara maka fako
ireny. Ho avy koa ny « Voiture de vantouse » ho
an’ny sampana « Mobilité urbaine » amin’ny fanalana ireo
«épave » Nahazo fitaovana, toy ny radio, gillet koa ireo « brigade
mobile » amin’ny fantanterahana ny asany. Manampy izany ny
nanomezana ny “Camera de surveillance” apetraka amin’ireo
toerana, tena ahitana fitohanan’ny fifamoivoizana, ahafahana
manara-maso ny fifamoivoizana.
Tsiahivina fa efa manana izany
fitaovana izany, miisa 20 ny eto an-dRenivohitra ka mbola niampy
roa indray izany, omaly.
monisipaly miaro tena…
Ankoatra izany, nofaranana, omaly
teny amin’ny vondron’ny Polisy monisipaly tetsy Anosipatrana ny
fanamafisana ny fahaiza-manao eo amin’ireo am-perinasa. Niatrika
izany ny ben’ny tanàna Andriantsitohaina Naina sy ny mpiara- miasa
aminy. Nahafahan’izy ireo mitadidy fitsipika maromaro, namerina sy
nanamarika ny efa hay ny fiofanana. Teo koa ny fifampizarana ny
traikefa sy ny hevitra vaovao fanatsarana hatrany ny asa eo amin’ny
Vondrona. Eo koa ny fampianarana ny fahaizana miaro-tena, ny
manavotra olona , ny fandridrana ny fifamivoizana ary ny
fanamafisana ny fampiarana ny fitsipika CMH. Nisy rahateo ny
fampisehoana «demonstration” ho famintinana ny fiofanana natao.
laharam-pahamehan’ny ben’ny Tanàna ao anatin’ny Veliranon’Iarivo
ny fanatsarana ny vondrona Polisy monisipaly sy ny sampana mpamonjy
voina. Mba ho asa mendrika sy mahafaly ny mponina. Tanjona ny mba
ho matihanina tanteraka izy ireo amin’ny asa ataony.
L’article Fampitaovan’ny Vigie ny CUA: niampy ny « camera » hanaraha-maso ny fifamoivoizana eto an-dRenivohitra a été récupéré chez Newsmada.
Jiolahy iray nitsoaka ny lapan’ny fitsarana tao Maintirano taorian’ny fandrenesany valin’ny fitsarana azy. Raikitra ny fanenjehana ka tratra tsy lavitra teo ihany ralehilahy. Fantatra tamin’ny fanadihadiana fa efa voatazona vonjimaika tao amin’ny fonja ao an-toerana izy noho ny resaka fisolokiana sy fisandohana andraikitra. Niakatra fitsarana, omaly, ny raharaha, nilatsaka ny didy ka mifonja enin-taona an-tranomaizina izy. Teo am-pitondrana azy hihazo ny fonja, nilaza ilay lehilahy fa handeha hivalan-drano kanjo nanararaotra nitsoaka. Nanao tifi-danitra indroa ireo zandary kanefa tsy nijanona ralehilahy ka nanenjika azy indray ireo fokonolona marobe. Vokany, tratra tao anaty ala honko izy ary naterina avy hatrany any amin’ny fonjan’i Maintirano. L’article Tselatra a été récupéré chez Newsmada.
Tsy misy intsony ny fihibohana …: misokatra ny faritra rehetra, miverina ny fampianarana
An-dalam-pandresena amin’ny ady amin’ny Coronavirus i Madagasikara… Foana, araka izany, ny fihibohana ary misokatra ny faritra rehetra, na mbola mitoetra hatrany aza ny hamehana ara-pahasalamana, ato anatin’ny 15 andro manaraka, araka ny lahatenin’ny filoha Rajoelina Andry, omaly.“Tsy misy intsony ny fihibohana tanteraka ny asabotsy sy alahady. Na izany aza, voarara ny famoriam-bahoaka, mihoatra ny 100. Misokatra ny zoma 4 jona izao ireo faritra rehetra nakatona. Anisan’izany Analamanga, Vakinankaratra, Matsiatra Ambony, Anosy. Mila mitandrina anefa ny rehetra ary entanina ny mponina hanaja ny fepetra ara-pahasalamana”, hoy izy.Mbola voatazona kosa anefa ny tsy fahazoana mivezivezy amin’ny alina ho an’Analamanga sy Vakinankaratra ary Matsiatra Ambony, manomboka amin’ny 11 ora alina hatramin’ny 4 ora maraina. Mbola mikatona ny toeram-pandihizana, ny karaoké, ny “restaurant” kosa ferana ho antsasany ihany ny mpanjifa ary manaja ny fepetra.Eo amin’ny fampianarana, miverina an-tsekoly avokoa ny mpianatra rehetra manerana ny Nosy manomboka ny alarobia 2 jona izao. Anjaran’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena ny mandrindra sy mandamina izany. Tahaka izany koa ireo mpianatra eny amin’ny oniversite. Miditra amin’ny alarobia izao ka handrindra ny momba izany ny eo anivon’ny minisiteran’ny Fampianarana ambony.Noferana roa isaky ny dabilio ny any am-piangonanaMiverina ny fotoam-pivavahana ka afaka misokatra avokoa ny fiangonana rehetra manerana ny Nosy. Ferana ho olona roa isaky ny dabilio anefa izany, arakaraka ny haben’ny fiangonana andraisana ny mpino. Misokatra ny tsenam-pokontany ary ferana ho iray ihany ny miantsena. Momba ny CTC kosa, mbola misokatra ny eny Andoharanofotsy sy i Mahamasina ary ny Village Voara. Nakatona ny eny Ankorondrano sy i Soamandrakizay, manomboka ny 2 jona izao ka hafindra amin’ny CTC hafa ireo marary. Hakatona koa ny “Hôtel Hopital” eto Antananarivo. “Tohizana ny ezaka vaksiny manerana ny Nosy ary efa miparitaka izany . Tsy an-tery anefa ny fanaovana izany fa an-tsitrapo”, hoy ny filoha.Tsy misy fiovana ny fepetra amin’ny asa. Tsy mbola miasa ny marefo ary mbola ny antsasany hatrany koa ireo miasa amin’ireo orinasa mampiasa olona mihoatra ny 500. Hohamafisina ny fepetra momba ny fahasalamana eny anivon’ny kaominina sy ny tanàn-dehibe hanentanana ny olona hanaja ny fepetra satria miditra amin’ny volon’andro ririnina isika.Hiasa ireo mpitatitra amin’ny zotra nasionaly“Henoko ny fitairainanareo mpisehatra amin’ny fitaterana. Tsy maintsy noraisina anefa ireny fepetra ireny”, hoy ny filoha. Hisokatra amin’ny zoma, araka izany, ny zotra nasionaly maneraka ny Nosy. Afaka miverina mandray ny asany ny mpitatitra rehetra. Tsy maintsy manaja ny fepetra ara-pahasakamana rehetra kosa anefa izy ireo. Anisan’izany ny fandrarahana fanafody amin’ny fiaingana sy ny fahatongavanan’ny taksiborosy. Tsy maintsy ampiasaina ny “Manifold”, ahafantarana ny mpandeha sy ny toerana alehany ao anatin’ny fiara. Hosaziana ireo tsy manaja ny fepetra, toy ny tsy fanaovana arovava orona.Afaka mifamezivezy hatrany, tsy iharan’ny “couvre-feu” ny fiara mpitatitra vokatra. Ho an’ny fitaterana ana habakabaka indray, misokatra ny zoma 4 jona izao ny sidina anatiny, hiantsorohan’ny orinasa Tsaradia. Tsy maintsy manao fitiliana adiny telo mialoha anefa ireo mpandeha. Mbola mihidy hatrany kosa anefa ny sidina ivelany, na ho an’ny miditra na ho an’ireo mivoaka. Ireo diplaomaty, atleta miaro ny voninahi-pirenena ary ireo sokajin’olona efa voafaritra tamin’ny filankevitry ny ministra ihany no afaka mivoaka sy miditra eto.“Aoka izay ny fandranitana… “Momba ny fizahantany kosa, efa miomana amin’ny fisokafana isika, indrindra ho an’ny Nosy Be sy i Sainte Marie, mpandray mpizahatany be indrindra. Hanaovana ezaka manokana ny fanaovana vaksiny ny amin’ireo toerana ireo, ka afaka misoratra anarana avokoa ireo mpisehatra amin’izany.Mbola voarara ny fitondrana razana miditra na mivoaka ny faritra rehetra manerana ny Nosy raha matin’ny covid-19. Tsy maintsy tanterahina ny andron’ny nahafatesany ny fandevenana ary tsy mihoatra ny olona 10 ny mpandevina. “Afaka mivoaka ny faritra izany raha fahafatesana tsy mifandray amin’ny valanaretina”, hoy ny filoha. Tsiahivina fa anton’ireo fepetra rehetra ireo ny nampihena ny tahan’ny tranga vaovao sy ireo lavo ary koa ireo efa vitsivitsy sisa mbola manaraka fitsaboana.Etsy andaniny, niantso firaisankina sy fiaraha-mientana manoloana izao ady amin’ny valanaretina izao ny filoha. “Tsy mila fandranitana sy fanakorontana intsony ny Malagasy. Ampy izay fa ampanjakana ny firaisankina ary aoka tsy haharaotina ny fahantrana noho ny covid-19”, hoy izy. Nanteriny fa fotoana tokony hanehoana ny fitiavan-tanindrazana izao.Synèse R. sy i Zoniaina ary Fano L’article Tsy misy intsony ny fihibohana …: misokatra ny faritra rehetra, miverina ny fampianarana a été récupéré chez Newsmada.
Natao teny amin’ny CCI Ivato, ny zoma teo, ny famoahana tamin’ny fomba ofisialy ny mpampianatra hiasa eny amin’ny EPP sy CEG, rehefa niofana teny amin’ny Ivontoeram-panofanana mpampianatra INFP. 87 (andiany Miatrika) ny isan’ny mpiofana nivoaka taorian’ny fiofanana roa taona ka hiasa eny amin’ny EPP. Fiofanana momba ny fomba fampitana fahalalana, psykolojia, fahaiza-mitarika… no natrehan’ny mpianatra. 93 (andiany Lova) hafa kosa hiasa eny amin’ny CEG rehefa nianatra nandritra ny roa taona. Mpanohana ny tetikasa ny Unicef.Hitohy ny maripana mafana kokoa sy ny andro maina ho an’ny telo andro manaraka eto Antananarivo, araka ny fanazavan’ny sampana mpamantatra ny toetry ny andro, omaly. Ho an’ny faritra sisa kosa, hahazo orana ny any Sambirano fa ny talata sy alarobia, hiitatra any amin’ny ilany avaratra iray manontolo ny orana. L’article Indray mijery a été récupéré chez Newsmada.